Ireo Feo Avy Ao Afrika Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Ireo Feo Avy Ao Afrika Atsimo
Voadika ny 14 Oktobra 2018 15:24 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2005)
Nolazaina ho sahala amin'ny paradisa politika mahatalanjona i Afrika Atsimo ary ny tetezamitantsika mankamin'ny demokrasia dia matetika nolazaina ho toy ny zava-mahagaga. Miezaka ny mampiseho endrika tsara sy fahombiazana ny firenena mba hisarihana ny fizahantany sy ireo famatsiambola avy any ivelany. Tsy misy fisalasalana fa nisy ireo ezaka nisongadina tontosa ary nomarihina tao anatina fotama tsy dia nisy herisetra sy fandatsahan-drà ny fotoanan'ny demokrasia. Na izany aza, ny tena zava-misy marina eo an-toerana dia mbola misy eo amintsika hatrany ny tarazon'ny fanavakavaham-bolonkoditra ary mitondra fanamby goavana ho an'ny governemanta sy ny fiarahamonina.
Ny iray amin'ireo olana goavana atrehan'ny firenena ankehitriny dia ny fizarazarana lalina izay manjaka ao anatiin'ny Kongresy nasionaly afrikana (ANC), eo amin'ny fitondràna, izay nanomboka nitranga tamin'ny taona lasa. Nitranga ireo fizarazarana ireo vokatry ny ady fahefana ho amin'ny fitantanana ny ANC sy ny firenena rehefa niala ny filoha Thabo Mbeki tamin'ny taona 2007. Mbeki izy tenany ihany sy ny fahavalony malaza, filoha lefitra teo aloha Jacob Zuma no atidohan'io ady io. Nesorin'i Mbeki i Zuma tamin'ny fiandohan'ny taona, noho izy voahenjika ho nanao kolikoly. ary tokony hiatrika fitsaràna amin'ny taona 2006. Nahazo hery ny ANC noho ireo mpiaradia taminy Alliance avy amin'ny elatra ankavia, ny Kongresin'ireo Sendikà an'i Afrika Atsimo sy ny antoko kaominista Afrikàna Tatsimo, ireo rehetra ireo izay nanao hetsika ho fanohanana an'i Jacob Zuma. Mahazo fanohanana avy amin'ny antoko neoliberaly sy ireo filohanà orinasa i Mbeki. Teo anelanelan'izay fotoana izay, natahorana hanimba tsikelikely ny fahafahany mitondra ny firenena ny fisamantsamahana nisy tao anatin'ny antoko. Araka ny Commentary. co.za manoratra toy izao:
Tsy maintsy miaiky aho hoe nanjary tsy takatry ny saiko mihitsy ny politikan'i Afrika Atsimo. Ary na tsy hanaiky an'io aza ny ankamaroan'ireo gazety, tsy resy lahatra aho fa ho fantatr'izy ireo koa izay mitranga… Efa nolazaiko io: ao anatina Fanjakana misy antoko iray manjaka, ny fotokevitra no iray amin'ireo hiharam-boina voalohany. Tsy misy intsony “antoko ankavia” na “antoko ankavanana”: ho solon'io, ny antoko eo amin'ny fitondrana no lasa “antokon'ny governemanta” fotsiny amin'izao. Nitranga tao Japana io, tamin'ny LDP, tamin'ny antoko liberaly tao Kanadà, ary efa ela koa tany aloha tany tao amin'ny ANC. Tsy midika akory izany fa hanjavona ny fifandonana ara-politika – hikisaka ho ao anatin'ny antoko eo amin'ny fitondrana fotsiny ilay izy, izay tsy hahafahan'ny vahoaka handatsa-bato mikasika izay ho vokany. Vokatr'izay, mitsahatra ho ady aman-kevitra fotsiny ny politika, ary ho lasa ady amin'ny maha-izy ny tsirairay.
Maneho hevitra ny South Africa Blog fa mihatsaravelatsihy ny antokon'i Zuma:
Ireo Tarik'i Zuma, dia mametraka ireo teboka iadiany hevitra efa voaomana hifanaraka amin'izay zavatra ilain'i Zuma havoaka amin'izay andro izay. Omeo azy ny androny eny amin'ny tribonaly, aza omena andro eny amin'ny tribonaly izy. Zava-dehibe ny fahambonian'ny lalàna, afatsy raha ohatra ka tsy tena zava-doza izany. Omeo laharam-pahamehana mandrakariva ireo mahantra, saingy aza raharahaina. Zava-dehibe ny lalàmpanorenantsika, afa tsy rehefa ampiharina amin'ny “Zanaka lahintsika” ihany. Filoham-pirenena lehibe tamin'ireo fotoana rehetra i Mbeki, saingy nanindrona antsika ivoho io faikan'olona io! Azo ampiasaina ireo media mba hitantarana ireo tantarantsika, fa tsy ny azy ireo!
Manjary feo mafy an'ireo vondron'ady sosialy eo an-toerana sy ny fiarahamonina sivily ny Indymedia South Africa, anisan'izany ny ady ho an'ny fananan-trano sy ny fanomezana tolotra fikarakarana ho an'ireo mahantra. Mponina ao Afrika Atsimo an-tapitrisa maro no miaina ao anatin'ireo tranobongo miorina any amin'ireo faritra tsy ara-dalàna, ary olana goavana iray ny famoizana aina rehefa kilan'ny afo ireo tranobongo ireo, satria ny olona voatery mampiasa an'ireo labozia sy ireo famanana amin'ny alalan'ny parafina. Nandritra ny haintrano farany teo, zazalahy kely iray vao herintaona no maty tao amin'ny faritra tsy ara-dalàna tao Kennedy Road, ao amin'ny faritanin'i KwaZulu Natal:
Tamin'ny Zoma lasa teo, tranobongo miisa 16 no may tao amin'ny faritra tsy ara-dalàna tao Kennedy Road tao Durban Mhlengi Khumalo, zazalahy kely vao herintaona monja, no tratry ny fahamaizana lalina ary maty ny sabotsy alina. Io no firehetana fahatelo tsy voafehy tamin'ity volana ity. Nanomboka nitranga ny afo rehefa voadona ka nianjera ny labozia. Hatramin'ny taona 2001, naptaka ireo fitaovam-pandrefesana ny lany tamin'ny jiro aloa mialoha tao amin'ireo tranobongo ireo. Mba hahazoana jiro, tsy maintsy mandoa vola R350 ianao ary afaka mampiseho ny tranga mahazo anao amin'ny fomba samihafa. Araka ny voalazan'ny S'bu Zikode avy ao amin'ny Kaomity Fampiroboroboana an'i Kennedy Road “Miankina amin'ilay mpameno antontan-taratasy ny zavatra rehetra. Raha sahala amin'ny tsy mahalala n'inon'inona ianao satria tsy mahay miteny anglisy, iangaviana tsotra fotsiny hiandry ao ivelany.” Nilaza tamin'ny mponin'i Kennedy Road hatreo ny eThekwini Metro fa misy “politika vaovao manakana ny fametrahana jiro any amin'ireo faritra tsy ara-dalàna”.
Tsy ela akory izay, nanatanteraka ny andro voalohany indrindra nanaovany ny tsy fampiasàna fiarakodia i Afrika Atsimo, ary nampikoriana ranomainty marobe tao anaty tontolombolongana teo an-toerana ny zava-misy. Niombon-kevitra ny ankamaroan'ireo olona fa fandaniana andro fotsiny ny fahitana hoe rafitra mikasika ny fitaterana iombonana tsy sahaza no napetraky ny firenena. Maneho ny fahatsapana ankapoben'ny ankamaroan'ireo olona ao Afrika Atsimo ny Moral Fiber, ao anatin'ny hafany mikasika ilay lohahevitra:
Araka ny hita dia toa sahala amin'ny nandray fiarakaretsaka sy fiarabe fitaterambahoaka Ireo mpikambana ao amin'ny governemanta mba handeha hiasa, io maraina io, anisan'izany ny Minisitry ny Fitaterana, sy ireo mpiasam-panjakana hafa. Mahazatra ny governemanta ny mirotsaka amin'ny fanaovana iraka momba ny fifandraisana amin'ny olona ireny fa tsy misy fieritreretana an'izay manahirana ny olona araka ny tokony ho izy. Mandalo krizy ireo fitaterambahoaka. Ny famporisihana be kokoa an'ireo olona hampiasa azy ‘io dia tsy hanao afa tsy ny hanasaro-javatra. Ilaintsika ny governemanta mba hanatsahatra ny fanazarantenany amin'ireo fifandraisana amin'ny vahoaka ary hipetraka marina mba tena hanandrana hamaha ny olana. Rehefa mamolavola rafitra iray fitateram-bahoaka tena mihodina marina ny minisitera, afaka manomboka amin'ny fanentanana ny fampiasana azy ireo izy avy eo.
Farany, eo amin'ny naoty maivamaivna kokoa, manoratra blaogy i Cherryflava mikasika ny fikarakarana fetibe iray ho an'ny whisky ao Cap Town.